Kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo iska xaadiriyey wareega afar dhamaadka tartanka Europa League +Sawiro – Gool FM
Bashiir April 18, 2019
( Yurub) 18 Abriil 2019 Kooxda Arsenal ayaa guul kale oo labaad ka gaartay Kooxda Napoli kulanka lugta labaad ee wareega sideed dhamaadka tartanka Europe League, natiijada ciyaarta ayaa ku soo dhmaatay 1-0.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ahaa mid aad u xiiso badan, Kooxda Napoli oo cidoodooda ku ciyaaraya ayaa dadaal ku bixinayey sidii ay isaga soo aar gudi lahaayeen labo gool oo laga soo dhaliyey kulankii lugta hore, balse xaalku ma noqon sidii ay doonayeen. Kaddib markii ay Arsenal ay la yimaadeen gool .
Daqiiqadii 36-aad ee ciyaarta laacibka reer Farance ee Lacazette ayaa dhaliyey gool laad xur ah, Arsenal ayaana hogaanka ciyaarta ku qabatay 1-0.
Napoli waxaa soo maray labo jaanis oo gool loo filan karay qeebtii hore ee ciyaarta balse midna kama aysan faa’ideysan in ay gool u badalaan.
Ugu dambeen kulanka qeebtiisa hore ayaa ku soo dhamaaday 1-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Arsenal, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Fursado badan oo ay abuureen qeebtii dambe ee ciyaarta Kooxda Napoli ayaa iska qasaarisay fursado badan oo gool loo filan karay, halka daafacyada Gunners ay sameeyesn difaacasho aad u qurx badan.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku soo dhamaaday 1-0 oo ay ku bidisay Kooxda Arsenal balse wadarta goolasha ee labada kulan ayaa ah 3-0.
Dhica kale kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Chelsea iyo Slavia Prague ee lugta labaad ee wareega sideed dhamaadka ayaa ku soo idlaaday 4-3 oo ay ku badisay Kooxda Chelsea lkn wadarta goolasha ee labada kulan ayaa waxa ay noqonayaan 5-3.